Dowlada UK Oo Caddeysay Mowqifkeeda ku Aadan Xiisada Badda Ee Kenya iyo Somalia. | Awdalmedia.com
Ben Fender oo ah safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa bixiyey wareysi xasaasi ah oo ku saabsan Xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda Soomaaliya.
Wareysigaan oo idaacadda Goobjoog uusiiyey, ayaa wax badan lagu waydiiyey Safiirka Arrimo ku aadan taageerada UK ee Soomaaliya, Ammaanka, iyo Mashaariicda dib u dhiska.
Arrinta ugu muhiimsan ee Safiirka la waydiiyey ayaa aheyd Khilaafka xagga Badda ee u dhaxeeyo Dowladaha Soomaaliya iyo UK.
Ben Fender ayaa sheegay in Dowladiisa ay dhex dhexaad ka tahay Khilaafka u dhaxeeyo wadamada Dariska ah ee Soomaaliya iyo Kenya.
“Britain boos ugama banaana xiisadda labada dal,” ayuu yiri Ben Fender
Safiirka ayaa si toos ah meesha uga saaray in shirkii London lagu xaraashay shidaalka Soomaaliya, sida ay dowladda Kenya ku dooday markii ay soo cayrisay safiirka Soomaaliya, ayada oo sheegtay in xirmooyin shidaal oo ku yaalla dhul lagu muransan yahay ay xaraashtay Soomaaliya.
“Shirkii London ma uusan aheyn mid wax lagu xaraashayey sida ay sheegeen qaban qaabiyaasha Shirkaas, Dowladda Ingiriiskana kama aysan qeyb aheyn”.
Muranka dalalkaan ayaa salka ku haaya sohdin badeedka, gaar ahaan goob la sheegay in ay qanni ku tahay shidaal iyo Gaas, waxayna dowladda Kenya ku doodeysaa inay dhulkaas leedahay balse waxaa la ogsoon yahay inaysan iyada laheyn sida laga dareemayo qalqalka siyaasadeed ee ka muuqdo iyo caddeymihii ay dowladda Soomaaliya hor geysay Maxkamadda Adduunka.
Sanadka 2020-ka ayaa la filayaa inay Maxkamadda Cadaaladda Adduunka go’aan kama dambeys ah ka qaadato murankaan dacwadiisa ay soo bilaabatay sanadkii 2014.
Dowladda Soomaaliya ayaa meesha ka saartay eedeynta ay soo jeedisay Dowladda Kenya, iyadoo si cad u sheegtay inaysan marnaba gorgorton ka geli doonin dacwadda taalo Maxkamadda Adduunka.
Dowladda Ingiriiska ayaa go’aankaan ku dhawaaqday maalmo kadib markii labada Madaxweyne ee Kenya iyo Soomaaliya ay ku kulmeyn Magaalada Nairobi kulan uu garwadeyn ka ahaa Ra’isulwasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed.